Malunga nathi -Vallow Electric Technology (Shanghai) Co., Ltd.
Itekhnoloji yeVarlot yoMbane (iShanghai) Co., Ltd.
Umgangatho yinkonzo yobomi yinjongo Ukunyaniseka ngonaphakade
Itekhnoloji yeVarlot yoMbane (iShanghai) Co., Ltd. lishishini lobuchwephesha obuphezulu elivunyiweyo kwaye labhaliswa ngamasebe karhulumente afanelekileyo. Inkampani yethu yinkampani enamatyala emiselweyo edibanisa ukuhanjiswa, ukuthengisa kunye neenkonzo zeshishini, kunye neqabane lexesha elide lokusasaza iqela leshishini ledijithali lakwa-China (China).
Inkampani ihambisa ikakhulu ezi mveliso zilandelayo zakwa-Nokia: PLC isilawuli esinokucwangciswa, inverter, ulawulo lwe-servo kunye neemveliso zokuqhuba, i-AC servo motor, ujongano lomatshini womntu kunye nomnwe wokuchukumisa, amandla asezantsi ombane kunye neemveliso zokusasazwa kwamandla, ulawulo lweemoto kunye neemveliso zokhuselo, amandla emizi mveliso unikezelo, umatshini wokutshintshiselana nge-Ethernet, njl. Ngelo xesha, sithengisa i-abb, iSchneider, i-Omron, iMitsubishi kunye nezinye iimveliso. Inkampani yethu iseke ubudlelwane bexesha elide kunye namashishini amaninzi aneemali ezinkulu kunye namandla obuchwephesha, ixabiso elikhethekileyo elifanelekileyo kunye nenkonzo ebalaseleyo yokuthengisa. Sibamkela ngokunyanisekileyo bonke abathengi ukuba batyelele, baphande kwaye bathethathethane ngamashishini.
"Iqabane lokusasaza leQela leShishini ledijithali lakwa-Nokia (China)"
"Amandla ophando kunye nophuhliso"
-I-Nokia igxile kwi-R & D yeepotifoliyo zemveliso zonxibelelwano ezibandakanya i-5G yezemizi-mveliso kunye nezisombululo zonxibelelwano zolwazi, ezenza ukuba intsebenziswano isebenze kwimizi-mveliso.
"Unikezelo olwaneleyo lwenkqubo ye-CNC kunye nezahlulo, ixabiso elifanelekileyo kunye nokukhetha, inkonzo ebalaseleyo yokuthengisa emva kokuthengisa"
Itekhnoloji, imveliso kunye novavanyo
Yasekwa ngonyaka we-1847, i-Nokia AG yinkokeli yehlabathi kwicandelo lobunjineli bombane kunye nobuchwephesha Ukusukela ekungeneni e-China ngo-1872, i-Nokia ibisoloko ixhasa ukukhula kwe-China ngobuchwephesha, izisombululo eziphezulu kunye neemveliso ngaphezulu kweminyaka eyi-140, kwaye iseke isikhundla esiphambili kwimakethi yaseTshayina enomgangatho obalaseleyo kunye nokuthembeka okuthembekileyo, impumelelo ekhokelayo kwezobuchwephesha kunye nokusukela okungapheliyo kwinto entsha.
I-Varlot ixhasa ukwenziwa kwedijithali kwikhonkco lonke lexabiso, elenza ukhuphiswano oluzinzileyo lweshishini kunye nezisombululo zokugqibela ezivela kuvavanyo, ukubonisana nokuphunyezwa kunye neenkonzo zokwenza ngcono. Kwinkqubo yenkqubo, kubandakanya imichiza, amayeza, isinyithi kunye nentsimbi, ukutya kunye nesiselo, iVarlot ukunceda ishishini ukuba liphumelele ngokukuko, ukusebenza ngokuchanekileyo nangokukhuselekileyo ngokuqonda okungcono kumzi mveliso, iVarlot inceda abathengi ukuba bakhulise imveliso kunye nokusebenza kakuhle, baqonde imveliso ekrelekrele kwaye baphucule ukhuphiswano.
IMISEBENZI EYOYIKEKAYO UKUBA IQELA LETHU LEGALE NGEGALELO KWIINKONZO ZETHU!
01 inkonzo yangaphambi kokuthengisa
-Uphando kunye nenkxaso yokubonisana.
Injineli yokuthengisa inika inkonzo yobuchwephesha.
Umnxeba weHot-line yokuthengisa injineli yeenkonzo zobugcisa.
Uvavanyo lwezobugcisa boqeqesho;
-Ukufakwa kunye nokulungiswa kweengxaki;
Ukuhlaziya kunye nokuphucula;
Ukubonelela ngenkxaso yobuchwephesha simahla kubo bonke ubomi beemveliso.
-Ukugcina ubomi bonke unxibelelana nabathengi, fumana ingxelo ngokusetyenziswa kwezixhobo kwaye wenze ifayile ye-
Imveliso esemgangathweni iyaqhubeka igqibelele.